အသွင်အပြင်:ပံ့ပိုးမှု၊ ကိုယ်ခန္ဓာပုံဖော်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ နွေးပါ၊ ဖိအားပေးမှု၊
ပစ္စည်းအခြား, Neoprene, ခါး Shaper
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်:Aofeite, ခါး Brace
ဝန်ဆောင်မှု:OEM / ODM, ခါးပံ့ပိုးမှု
ထုပ်ပိုးခြင်း -1 pc / စစအိတ်
ခါး Brace အနိမ့်ကျောကိုအထောက်အပံ့ပေးပြီးသင့်လျော်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်ရုတ်သိမ်းရေးနည်းစနစ်များကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ခါးထောက်ပံ့မှု ခါးပတ်အပိုကျယ်ပြန့်ထောက်ခံမှုအခြေစိုက်စခန်းအောက်ပိုင်းကျောနှင့်ဝမ်းဗိုက်ဒေသမှထပ်မံထောက်ခံမှုပေးသည်နှင့်သင့်လျော်သောကျော alignment ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ ခါးကိုညှပ်သင်၏အားကစားကာလအတွင်းနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းမရှိဘဲခိုင်ခံ့မြဲမြံစေရန်ခိုင်ခံ့သောခါးပတ်သည်ကန့်သတ်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်။ Neoprene ခါးပတ်သည်ထိရောက်စွာပြုပြင်နိုင်ပြီးကျောရိုးနာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည်
lumbar စွမ်းဆောင်ရည်ခါးပတ်, ခါးခါးပတ်၏လျှောက်လွှာ 1. အဘယ်သူသည် lumbar disc ကိုအူကျရောဂါ, ischialgia, lumbar အရိုး hyperplasia ခံစားကြရသည် ကားမောင်းသူ၊ ရုံးလုပ်သား၊ စားပွဲထိုးစသည်တို့ကဲ့သို့အမြဲတမ်းမတ်တတ်ရပ်နေသူ။ ခါးကြွက်သားကာကွယ်မှုအတွက်အားကစား၊ ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလိုမျိုး 4. ကိုယ်အလေးချိန်ချင်သူတွေကို အလုပ်များသောအလုပ်သမားများအတွက်
အမည်: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Back အထောက်အပံ့ အရိုးအထူးသဖြောင့် ခါးသင်တန်းပေးသူ ခါးပတ် မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ။ : AFT-Y011 အရွယ်အစား: သင်လိုအပ်သမျှအရွယ်အစား ထုပ်ပိုး: တံဆိပ်နှင့်အတူစိတ်ကြိုက်နှင့်အတူ poly အိတ်နှုန်း 1 pc အင်္ဂါရပ်များ: ရေစိုခံနှင့်အကြမ်းခံ MOQ: ၁၀ ယူနစ်၊ အမှာစာအသေးစားကိုကန ဦး မှာယူရန်ကြိုဆိုပါသည် နမူနာ - ရရှိနိုင်တဲ့နမူနာနဲ့ကုန်တင်ကုန်ချတွေကိုအလွန်တန်ဖိုးထားတယ် Loading port - သင်အဆင်ပြေစွာပြောင်းနိုင်သော Tianjin သို့မဟုတ်အခြား port တစ်ခု ပစ္စည်းပို့ရန်နည်းလမ်းများ - ပင်လယ်ပြင်နှင့်လေကြောင်း၊ အသေးစားကှကျကို DHL, UPS, FEDEX, EMS & TNT ကိုရွေးချယ်နိုင်သည် ရရှိနိုင်သည့်စျေးနှုန်းများ - EXW, FOB, CNF & CIF ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း: T / T, L / C, West Union, Paypal & Cash
အကောင်းဆုံးစံပြအရိုးခါးပတ်ခါးပန်းထုတ်လုပ်သူနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူကိုရှာဖွေနေပါသလား။ သင်၏ဖန်တီးမှုကိုကူညီရန်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ Back Back Straightening Belt အားလုံးသည်အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသည်။ ကျောပိုးအိတ်ခါးပတ်ကြိုးနောက်ခံရှိတရုတ်မူလစက်ရုံဖြစ်သည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အားအခမဲ့ဆက်သွယ်ပါ။
ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားများ - ခါးတွင်ပံ့ပိုးမှု
ညှိနိုင်သော Tourmaline ကိုယ်တိုင်အပူပေးခါးနောက်ကျော ...
ကြီးသောစျေးနှုန်းနှင့်အတူနှစ်ကြိမ်ဆွဲ lumbar သတ္တုအထိမ်းအချုပ်